Vapurotesitendi vanorova bhanga reBeirut, 'kusunungura' $ 180K 'kubiwa' kubva kuvanhu veLebanon
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Rebhanoni Breaking News » Vapurotesitendi vanorova bhanga reBeirut, 'kusunungura' $ 180K 'kubiwa' kubva kuvanhu veLebanon
Mune chinyorwa cheFacebook, Banin Charity Association yakati yawana 'mamwe' madhora zviuru zana nemakumi masere, ayo aiti bhangi iri 'rakapamba' kubva kuvanhu varombo.
Vanoratidzira vanoda mukana wekuwana mari 'yakatorwa' kubva kuvanhu veRebhanoni.
Mapurisa akashevedzwa kunzvimbo iyi kuti vabvise varatidziri muchivako ichivhurira nzira dzakapoteredza.
Mukutaura, bhanga rinoti vatatu vevashandi varo vakakuvara mumhirizhonga.
Lebhanese Swiss Bank muBeirut yakadenhwa ne'vazhinji 'vevaratidziri vakatsamwa avo vaida kuwana makumi ezviuru zvemadhora' akapambwa 'kubva kuvanhu veLebanon.
Mifananidzo kubva kuguta reHamra guta guru reLebanon nemusi weMuvhuro inonzi yakaratidza vanhu vachirwisa vashandi vebhangi uye vachikanda zvinyorwa zvebhangi kubva pamawindo echivako.
Mabhanhire airatidza mameseji ekuti bhanga rakanga raba mari dzevanhu raigona kuonekwa rakarembera pamusuwo webhangi, pamwe nechaunga chevaratidziri pamberi pechivakwa.
Mamwe mavhidhiyo akaburitswa nenhepfenyuro yemuno akaonekwa kuratidza varatidziri vachitenderera bhangi uye vachipinda mumakamuri akasiyana echivako.
Sekureva kwenhau dzemuno, moto wabudawo mukati mebhangi.
Lebanese Swiss Bank yakati yakazvirondedzera NGO iyo Banin Charity Association yakanga yatora bazi rayo reHamra. Sangano iri zvakare rakati rakanangana nezviitiko zveMuvhuro.
Mukutaura, bhanga rinoti vatatu vevashandi varo vakakuvara mumhirizhonga, kusanganisira mumwe akarapwa muchipatara akatsemuka kumeso maviri achida kuvhiyiwa.
"Vanoda kusvika zana varume veBanin Charity Association vakapinda muchivako chehutungamiri hukuru hwebhangi redu, vachirova vashandi vedu," akadaro chirevo chebhangi.
Bhengi iri rakatiwo maneja webazi akatyisidzirwa nemhirizhonga kunze kwekunge aendesa mari kunze kwenyika.
Nekuda kwekukombwa kwebhangi neMuvhuro, Association of Banks muRebhanoni yakati mune chirevo chekuti mamwe masangano emari acharamba akavharwa neChipiri muchiito chekubatana nebazi rakakombwa.
Mhirizhonga nekuratidzira muRebhanoni zvazova nzvimbo yakajairika sezvo nyika yaramba ichienda kunhanho yezvehupfumi, yakawedzera huori hunofungidzirwa nehurumende, denda, mhirizhonga yezvematongerwo enyika, uye kuputika kunoparadza muPort of Beirut muna Nyamavhuvhu apfuura.
Nyika iri kubatawo nekushomeka kwakakura kwechikafu nemishonga.
Dzimwe kuratidzira kwakaitwa mukupera kwesvondo vachipindura danho rehurumende rekuwedzera kudzikisa kukosha kwepondo reLebanoni kurwisa dhora.